संसारभरि प्रशंसक लागि खेल घटनाहरूको अनलाइन प्रसारण गर्न व्यापक पहुँच को आगमन संग शाब्दिक आफ्नो मनपर्ने टोली हरेक म्याच हेर्न मौका खुलेको छ। र मात्र लिखित, तर सीधा र वास्तविक समयमा। निस्सन्देह, खेल को प्रशंसक लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कारक छवि गुणस्तर छ। खुसीको कुरा, आज, शाब्दिक जो कोहीले राम्रो ध्वनि र तेज तस्वीर संग खेल हेर्दै रमाइलो गर्न किन्न सक्छन्। यसो गर्न, तपाईं "Sopkastom" कसरी प्रयोग गर्ने संग मात्र सम्झौता गर्न आवश्यक छ।
एक मित्र संकेत गर्न - "Sopkast"
इन्टरनेटमा भिडियो उहाँले जो विश्व नेटवर्क संग गर्न केहि कहिल्यै थियो कि देख्न गर्दैन। र लगभग किनभने सबैलाई डाउनलोड बिना दृश्य गुणस्तर तस्बिरहरू बस अव्यावहारिक छ भन्ने थाह छ। विशेष, च्यानल धेरै प्रयोगकर्ता जोडिएको छ भने।
यो पानी प्रणाली संग तुलना गर्न सकिन्छ। को वाल्व एक मानिस खोल्न भने, त्यसपछि यो अपेक्षाकृत चाँडै गर्न सक्षम हुनेछ पानी संग बाल्टिन भर्नुहोस्। तर, क्रेन छैन एक, तर दुई छ भने, दबाव को साथ प्रयोग एकदम कम हुनेछ। साथ पानी आपूर्ति फाइदा लिन चाहनेहरूको दर्जन को एक जोडी जडित भने, त्यसपछि प्रत्येक को शेयर मात्र एउटा सानो trickle रहनेछ।
को P2P को सञ्चालन सिद्धान्त
प्रविधिलाई P2P? (एक गरयो शाब्दिक "साथीहरूको गर्न साथीहरूको" अर्थ) एक मौलिक नयाँ जानकारी प्रसारण संरचना प्रयोग छ। र यो "Sopkastom" कसरी प्रयोग गर्ने पत्ता लगाउन चाहने कसैले फेला पार्न रोचक हुनेछ।
हामी P2P प्रविधि यातायात च्यानल प्रयोगकर्ता प्रयोग गर्दा पानी लिन गर्दैन पानी आपूर्ति, संग analogy जारी भने, र नै पानी वितरण प्रणाली को भाग हुन्छ। EDAC "ट्यूब खण्ड"। त्यो बारी मा, अरूलाई नै पहुंचाता प्रयोगकर्ता बस जानकारी प्रवाह स्वीकार गर्दैन, छ, र।
लाभ र कार्यक्रम को बेफाइदा
गरेको असल सुरु गरौँ।
पहिले, यो कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क छ। त्यसैले आधिकारिक साइटबाट डाउनलोड र आफ्नो अवकाश मा प्रयोग गर्नुहोस्।
दोश्रो, बस प्रतियोगिता बाहिर क्षणमा छवि गुणस्तर। र यो कारक "Sopkastu" अनुमति दिएको छ सबै दुनिया भर प्रयोगकर्ता बीच यति व्यापक थिए छ।
ओह, र तेस्रो, कार्यक्रम चासो को एक विस्तृत श्रृंखला कि यहाँ सबैलाई उहाँले रुचि के पाउन सक्नुहुन्छ कवर प्रसारण गर्न।
को कमियां लागि जाँदा, तिनीहरूले शायद प्रसारण गर्न प्रतिलिपि अधिकार धारकहरुको अनुमति देखि आउनुहोस्। र यो एकदम प्राकृतिक छ - जो भुक्तानी च्यानलहरू देखि लाभ गुमाउन चाहन्छ? आधिकारिक प्रतिनिधिको को "Sopkastom" कसरी प्रयोग गर्ने, र च्यानलहरू बन्द कटौती गर्ने प्रयास राम्ररी थाह छन्। तर हालसम्म प्रयासमा असफल भएको छ।
फुटबल र "Sopkast"
"Sopkast" -TV, वास्तवमा, हाम्रो लागि सामान्य टेलिभिजन प्रसारण को एक एनालग छ, तर एक विश्वव्यापी मात्रा मा। यहाँ तपाईँले मेल खाने लिग बेसबल संग राष्ट्रिय पोर्टोरिकन टेलिभिजन बराबरीको केही को कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ।
तर अवस्थामा, यो "Sopkastom" कसरी प्रयोग गर्ने को 98% हाम्रो देशमा तपाईं फुटबल प्रशंसक सिक्न। को छाप अन्य उद्देश्यका लागि यो बस प्रयोग गरिन्छ कि छैन। सायद यो सबैभन्दा हाम्रो अक्षांश मा लोकप्रिय, यो फुटबल हो भन्ने तथ्यलाई कारण छ। "Sopkast" पनि फुटबल जीवनको सबै महत्वपूर्ण र धेरै घटनाहरू ट्रयाक राख्न अनुमति दिन्छ।
कार्यक्रम प्रयोग निर्देशन
एक पटक तपाईं डाउनलोड र आफ्नो कम्प्युटरमा कार्यक्रम स्थापना, यो सुरु। औसत प्रयोगकर्ता अर्थमा बनाउन गर्दैन लागि प्रोफाइल सिर्जना गर्नुहोस्। यो मात्र होइन कार्यक्रम हेर्न चाहने ती लागि आवश्यक छ, तर पनि आफ्नै रेकर्ड प्रसारण। त्यसैले, "बेनामी हेर्नुहोस्।" विकल्प चयन
ठेगाना पट्टी मा, इच्छित ठेगाना प्रविष्ट (तिनीहरूले वितरण घोषणा साइटहरूमा लिइएका हुन्) र अर्को तीर मा क्लिक गर्नुहोस्।
सबै तयार छ। तपाईं हेर्दै आनन्द उठाउन सक्छौं।
Foul - एक खेल खेल मा नियम उल्लङ्घन
फुटबल खेलाडी Sven Bender: स्पोर्ट उपलब्धिहरू र जीवनी
सारांश: "nonlethal GOLOVAN" एन एस Leskova। उत्पादन को विश्लेषण
सबै भन्दा राम्रो युद्ध चलचित्र: गर्न नबिर्स ...
फिल्म "पहाड शूटिंग": अभिनेता र भूमिकाको